トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul sehatra Ny dingana faharoa, ny "fizahan-toetra" dia
Avy mahita lalana
mahazo kambana Seoul [3500 Yen Free fanombanana] tena mamantatra ny hoavy, rehefa miezaka ny hiverina any iray ny fanahy ankoatra izany, dia voalaza fa azo antoka hamaky ny dingana fito. Ao amin'ny dingana voalohany mba mamantatra ny hafa, ary ny fanontaniana mafy sy ara-panahy fifohazana, fa ny lasa ny fotoana dia sehatra antsoina hoe "fizahan-toetra" ny dingana faharoa.
Izany dia voalaza fa hiseho voalohany amin'ny fitsapana mandalo amin'ny dingana fito. Raha vao lasa ny heviny ara-panahy, sehatra mba hiatrika ny tena olana dia ny dingana faharoa. Ny "fitsapana", raha fantany fa ianao tia mafy tsirairay samy hafa, dia ny hoe ny ny soso-kevitr'izy ny tena olana nomena iray amin'ireo fahoriana mafy ny fomba hiroso amin'ny dingana manaraka.
hatramin'izao satria ny olona roa izay tonga iray hafa tanteraka ny fiainana, dia tsy ho afaka ho lasa iray mora na dia ny fanahin'ny mifanitsy. Hatreto ny ny hambom-pon'ny izay efa namboly eo amin'ny fiainana tsirairay, dia izay hahakivy ny dashes hiala ny heviny izay nahazo teo amin'ny dingana voalohany.
tamin'ny voalohany fotoana ny fahoriana mafy
? traikefa sy ny dingana faharoa ny fahalalana dia izao Kaowodasu
kambana Seoul Twin Seoul tsirairay traikefa ny fitiavana no nametraka, fifohazana ara-panahy izay za-draharaha teo amin'ny dingana voalohany dia nanadino ho hahazo. Izany hoe, noho ny fanahy no miantso ny tsirairay, ny traikefa sy ny fahalalana azo izay efa niaina hatramin'ny ankehitriny dia ny hipetraka ny fanantitranterana ny fihetseham-po.
? ary fa izaho efa tsy ao amin'ny fitiavana izay efa niaina mandrakizay
ho tia azo amin'ny imprinting ny tany an-dalana izany, ho tonga toy ny mpanompo izay fitsipika napetraka teny an-manokana ny zavatra niainany Xiang. Ary hiteny, izany no efa nijanona ao an-tsaina amin'ny fomba fa ny imprinting. Fahatsapana fa manintona ny hafa mafy amin'izy samy izy ao amin'ny
ny dingana voalohany, dia hihena ny Tadidio imprinting ity. Avy eo, dia afaka mitsikera ny an'ny antoko hafa miorina amin'ny ny imprinting, koa Hetsika, toy ny na amin'ny fanahiana nanandrana tany aloha ny fitiavana niafara tamin'ny mitana ny fahatsapana ny fialonana sy ny ahiahy avy izay ho avy.
? hambom-pon'ny mba hanoherana hamelezana azy no ambolena ao amin'ny sarotra
lasa traikefa hambom-pon'ny dia tsy natao ho toy izany mora foana amin'ny tondro-molotra. Be loatra ny hafatotra ny hambom-pon'ny, dia tsy ho afaka hampihena ny elanelana misy eo amin'ny kambana fanahy. Izany dingana izany dia ny mahatsapa voalohany fanaintainanao izay endri-javatra lehibe ao amin'ny dingana faharoa.
kambana fanahy amin'izy samy izy, fa na afaka mandresy ny fahoriana mafy dia naharesy izany dingana faharoa dia ariana amin'ny ho avy ny fanalahidin'ny
ny hambom-pon'ny, efa tamin'ny matetika sarotra. Noho izany antony izany, ny kambana fanahin'ny fanahiana mafy sy ny fijaliana ao amin'ny dingana manaraka, ary dia matetika hiaina ny fisarahana.
zara raha, ny tebiteby sy ny fijaliana hanadio ny fitsapana eo amin'ny dingana faharoa, fa mety hiroso amin'ny dingana eo aminy tsy hanitsaka ny fisarahan'ny ny sehatra, dia ho tsara kokoa ny tsy manantena be loatra. Na na tsy mandresy ny fahoriana mafy, dia ho entina eo an-dingana manaraka.
Mety hiroso amin'ny dingana eo aminy tsy hanitsaka ny di, nefa azo inoana fa tsy tokony hanantena be loatra. Na na tsy mandresy ny fahoriana mafy, dia ho entina eo an-dingana manaraka.